Geomembranes Is -dhejis ah
Dhaqanka Kala duwanaanta
Taariikhda Sharafta leh
Mashaariicda qashin -qubka
Mashruucyada tunnel -ka iyo waddooyinka
Mashruucyada Dam & Lake
Carwo Ganacsi Waxay Abuurtaa Fursado Badan
Bandhiggii 12 -aad ee Dhismaha iyo Qurxinta Qalabka Caalamiga ah oo lagu qabtay Kunming, Yunnan laga soo bilaabo 29 -kii Luuliyo ilaa 31 -kii, 2021. Bandhiggu wuxuu u qaybsan yahay hoolka tiknolojiyadda biyaha magaalada, hoolka tamarta cagaaran, hoolka maaddada polymer -ka, sayniska dhismaha iyo hoolka farsamada, albaabada a .. .
DHISMAHA NIDAAMYADA BADBAADINTA EE WAXTARKA MACDANKA FOSPHOGYPSUM
Horumarinta degdegga ah ee warshadaha, wasakhaynta iyo waxyeellada bay'adu waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u daran. Dhibaatooyinka deegaanka sida qiiqa gaaska aqalka, wasakheynta biyaha iyo ciidda xad -dhaafka ah ee biraha culus ayaa ah dhibaatooyinka deegaanka ee caamka ah ee wajahaya adduunka. Es ...
Biyo -xireenka bakhaarka ee Cheng Du Grain Group Co., Ltd.
Sugnaanta cuntada ayaa saldhig u ah horumarinta dhaqaalaha. Kaydinta hadhuudhku waxay leedahay shuruudo aad u sarreeya oo ku saabsan qoyaan-caddaynta iyo caddaynta daadinta bakhaarka. Gariiradda laamiga ah ee SBS waxay leeyihiin khataro dab oo weyn inta lagu guda jiro hawsha dhismaha. Dhismaha ...
Alaab -qeybiye Qalab Biyo -La'aanta ah oo loogu talagalay Ciyaaraha Jaamacadda Adduunka ee Cheng Du 2021
Jaamacadda 31 -aad waxaa lagu qaban doonaa Ogosto 18, 2021 magaalada Chengdu, oo ah magaaladii ay ku dhasheen pandas. Trump Eco Technology Co., Ltd. waa shirkad maxalli ah oo ku taal Chengdu. Xidid ku leh warshadaha biyaha biyuhu in ka badan 35 sano. Iyada oo leh tayo aad u wanaagsan iyo adeeg aad u fiican, waxay ku guuleysatay aqoonsiga iyo kalsoonida ...
Miisaanka polyetylen ee cufnaanta sare wuxuu koraa 2026 dhammaadkiisa
Suuqa caalamiga ah ee HDPE waxaa lagu qiimeeyay US $ 63.5 bilyan sanadkii 2017 waxaana la filayaa inuu gaaro $ 87.5 bilyan marka la gaaro 2026, iyadoo heerka koboca sanadlaha ah ee isku dhafan uu yahay qiyaastii 4.32% inta lagu jiro xilliga saadaasha. Polyetylen-cufnaanta sare (HDPE) waa polymer-kuleyl-ka-samaysan oo laga sameeyay monomer ethylene oo laga sameeyay nat ...
Cufnaanta sare ee polyetylen (HDPE) rajada suuqa geomembrane, arrimaha horumarka, fursadaha ugu dambeeyay iyo saadaasha 2027 | GSE Holdings, AGRU, Solmax, JUTA
Los Angeles, USA: The Global High Censity Polyethylene (HDPE) Warbixinta Suuqa Geomembrane waxay bixisaa sirdoon aad u wanaagsan oo u saamaxaya ka -qaybgalayaasha suuqa inay si wanaagsan ula tartamaan tartamayaasha ugu adag ee ku saleysan koritaanka, iibka iyo arrimo kale oo muhiim ah. Marka lagu daro dhaqdhaqaaqa suuqa ee muhiimka ah (oo ay ku jiraan ...
Marka la gaaro 2026, suuqa maaddada geosynthetic wuxuu gaari doonaa US $ 45.25 bilyan; adeegsiga baaxadda leh ee qalabka dhismaha waara si kor loogu qaado kobaca: Fortune Business Insight ™
Abriil 2, 2020, Pune (GLOBE NEWSWIRE) -Qiyaasta suuqa maaddada geosynthetic-ka adduunka ayaa la siin doonaa fiiro gaar ah iyadoo ay ugu wacan tahay isticmaalka sii kordhaya ee qalabka dhismaha waara. Nidaamka dhulku wuxuu yareeyaa adeegsiga agabyada dabiiciga ah (sida wadarta iyo ciidda), taas oo fududeyneysa waxqabadka dhismaha ...
Isticmaalka Daelim HDPE Geomembrane waxay keeni kartaa macdan soo saar badan. Habsocodyo cusub oo ku lug leh habka tuubada tuubada ee soo saarida biraha qaaliga ah iyadoo la adeegsanayo xalalka kiimikada ayaa keentay in laga soo saaro qiimo jaban macdanta darajooyinka hoose. Isticmaalka xargaha dabacsan ee Daelim Geomembrane waxay ka hortagtaa faafidda ...
Beeraha haamaha ayaa la safay si looga hortago wasakheynta biyaha dhulka haddii ay dhacdo in kiimiko daadato. Nidaamka haynta labaad waxaa lagu dhejin karaa shubka ama si toos ah dhulka. Nidaamyadan xarriiqda ah ee haynta labaad waxay noqon karaan kuwo aad u casri ah iyadoo la adeegsanayo lifaaqyo faahfaahsan oo taangiga iyo ot ...
Adeegga qashin -qubka
HDPE Geomembranes waxaa loo adeegsadaa daboollada qashin -qubka si looga hortago qulqulka dareeraha ee qashin -qubka, taas oo yareyneysa ama baabi'ineysa soo -saaridda dareeraha qashinka ka dib marka la buuxiyo qashin -qubka. Daboolka waxaa sidoo kale loogu talagalay inuu dabin iyo si habboon u hufiyo gaasaska la soo saaro inta lagu kala daadanayo qashinka dabiiciga ah. Xayeysiis kale ...
Ujeedada koowaad ee xarigga HDPE Geomembrane ee qashin qubka ayaa ah in laga ilaaliyo biyaha dhulka hoostiisa inay wasakhoobaan. Daelim HDPE Geomembranes waxay u adkaystaan ​​qashinka badankood waxayna dhaafaan shuruudaha aan la awoodin. Goobaha qashin-qubka ee halista ah waxay u baahan yihiin laba-jibaarayaal iyo ururinta leachate / ka-saarista ...
Tan iyo 1950 -meeyadii, injineerada ayaa si guul leh u naqshadeeyay geomembranes. Adeegsiga geomembranes -ka, oo sidoo kale loogu yeero xarriiqyada xuubka dabacsan (FMLs), ayaa kordhay iyada oo ay ugu wacan tahay walaaca sii kordhaya ee wasakheynta kheyraadka biyaha qiimaha leh. Qulqullada daloolka leh ee caadiga ah, sida shubka, bogaadinta ...
Trump Eco Technology Co., Ltd. waa shirkad weyn oo ku hawlan cilmi -baarista, wax -soo -saarka iyo iibinta geosynthetics iyo macromolecule qalabka biyuhu aanay biyuhu lahayn.
Cinwaanka: No.32, dhismaha xafiiska saxan -gacmeedka, Wadada Jinke, Degmada Jinniu, Chengdu, Shiinaha 610036